သင် စိတ်ဓာတ်ကျနေလား ... ဗီတာမင် ပြည့်ဝအောင်စားပါ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
သင် စိတ်ဓာတ်ကျနေလား ... ဗီတာမင် ပြည့်ဝအောင်စားပါ
စိတ်ကျရောဂါဆိုတာ ကုသရမယ့်ရောဂါတစ်မျိုးပါ။ စိတ်ဓာတ်ကျမနေနဲ့ ပျော်ပျော်နေဆိုပြီး ပြောရုံနဲ့မရပါဘူး။ စိတ်ကျရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ -
● ဘာကိုမှ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူး
● အစား မစားတော့တာ၊ ဒါမှမဟုတ် ပုံမှန်ထက် ပိုစားတာ
● အပြစ်ရှိသလို၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာတန်ဖိုးမှမရှိသလို ခံစားရတာ
● စိတ်တွေ ရှုပ်ထွေးနေတာ
● အိပ်မပျော်တာ၊ အရမ်းအိပ်တာ
● ဒေါသကြီးတာ၊ ရုတ်တရက် ထပြီး ပေါက်ကွဲတာ
● သတ်သေဖို့ အတွေး တွေးတာ
● ဘာအကြောင်းမှမရှိဘဲ နာနေတာ စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Ultra B 1
စိတ်ကျရောဂါကို မကုသဘဲထားရင် နေ့စဉ်ဘဝမှာပါ ထိခိုက်လာသလို ကိုယ်ကျန်းမာရေးပါ ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကျရောဂါရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေကတော့ -
● ခန္ဓာကိုယ် နာကျင်လာတာ
● ဆေးသုံးတာ၊ အရက်စွဲတာ
● မိသားစုတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဆင်မပြေ ဖြစ်လာတာ
● တစ်ယောက်တည်း နေလာတာ
● ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိခိုက်နာကျင်အောင် လုပ်တာကနေ
● မိမိကိုယ်ကို သတ်သေဖို့ ကြိုးစားတာအထိ ပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်။
စိတ်ကျရောဂါကို ကုသတဲ့ နည်းတွေက အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ဆရာဝန်က သင့်တော်တဲ့နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ပေးပြီး လိုအပ်ရင် သောက်ဆေးပါ တိုက်ပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ကုသမှုခံယူနေပြီး ဗီတာမင်တွေပါ တွဲသောက်ရင် အကျိုးရှိနိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
Ultra B 2
စိတ်ကျရောဂါအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ ဗီတာမင်များကတော့ -
1. ဗီတာမင် B
စိတ်ကျရောဂါ ခံစားနေရတဲ့လူတွေမှာ ဗီတာမင် B အထူးသဖြင့် B12 ချို့တဲ့နေတာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဗီတာမင် B က ဦးနှောက်ကနေ စိတ်ခံစားမှုတွေကို ထိန်းချုပ်တဲ့ chemical တွေ ထုတ်ရာမှာ အရေးပါ ပါတယ်။ အသက်ကြီးလာရင် ခန္ဓာကိုယ်က B12 ကို သိပ်ပြီး မစုပ်ယူနိုင်တော့ပါဘူး။
2. ဗီတာမင် B3
သူက စိတ်ကိုပျော်စေတဲ့ စီရိုတိုနင် ထုတ်ရာမှာ အရေးပါပါတယ်။ စိတ်ကျရောဂါ ခံစားနေရသူတွေမှာ စီရိုတိုနင်က ကျနေတတ်ပါတယ်။
3. ဗီတာမင် B9 (ဖောလစ်အက်စစ်)
သူကတော့ ဖောလစ်အက်စစ်လို့ သိကြတာ များပါတယ်။ သူလည်း ပျော်ရွှင်စေတဲ့ ဟော်မုန်းဖြစ်တဲ့ ဆီရိုတိုနင်ဟော်မုန်း ထုတ်ရာမှာ ကူညီပေးပါတယ်။
4. ဗီတာမင် ဒီ
သူကတော့ ဆောင်းရာသီ စိတ်ကျရောဂါမှာ သုံးပါတယ်။ နေကို မမြင်ရတော့တဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ ဗီတာမင်ဒီက ခန္ဓာကိုယ်က နေရောင်ကို ထိတွေ့ပြီး ထုတ်လုတ်တာဖြစ်လို့ ဆောင်းရာသီမှာ ကျနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဗီတာမင်ဒီ အပြင်က သောက်ပေးတာက စိတ်ကို တက်ကြွစေပါတယ်။
သူကတော့ ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာ၊ ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးပါတဲ့ ဗီတာမင်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
သူ ချို့တဲ့ရင် အိပ်မပျော်တာ၊ ဝမ်းချုပ်တာ၊ ကြွက်သား တောင့်တင်းတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဦးနှောက်ကနေ စိတ်ပျော်စေတဲ့ဟော်မုန်း ထုတ်ရာမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
ဗီတာမင်စီက စိတ်ကို တက်ကြွစေပါတယ်။
၂၃.၉.၂ဝ၂၁ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုတဲ့ ရောဂါက လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းက စိတ်ကူးနဲ့တောင် မတွေးဖူးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ လူသားတွေရဲ့ဘဝကို ပြောင်းလဲမှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ဒီဗိုင်းရပ်စ်က လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ သေးငယ်တဲ့ အမှုန်အမွှားလေးတွေ၊ လေထုထဲကနေ၊ ပိုးနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုကနေ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ သတိထ...
၂၂.၉.၂ဝ၂၁ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
အများအားဖြင့် ပိုးသတ်ဆေးတွေ စသောက်တဲ့အချိန်ကစလို့ လက္ခဏာတွေက သက်သာလာတတ်ပါတယ်။ ပြန်နာလန်ထချိန်ကတော့ အသက်အရွယ်၊ မူလရောဂါအခံ ရှိ/မရှိ၊ အဆုတ်ရောင်ခြင်း ပြင်းထန်မှုပေါ် မူတည...